Tajaajilli BBC afaanota Igboo fi Yorubaatiin eegale. - BBC News Afaan Oromoo
Tajaajilli BBC afaanota Igboo fi Yorubaatiin eegale.
BBC Afaan Igboo fi Yoruubaa, Naayijeeriyaa akkasumas Lixa fi Giddu-gala Afriikaa tajaajiluu, harra tajaajila saanii eegalu.
Tajaajiloonni kunneen qaama baballina BBC 1940 booda taasifamaa jiruu yoo ta'an, mootummaa UK'n kan baasiin irratti taasifame.
Tajaajilli Afaan Igboo jiraattota Baha fi Kibba Lixa Naayijeeriyaa fi Diyaaspooraa afaanicha dubbatu irratti xiyyeeffata. Afaan Yoruubaa ammoo Kibba Lixa Naayijeeriyaa, Beeniin fi Toogoo akkasumas diyaaspooraa kan biroo fuulleffata.
Tajaajiloonni kunneen guutummaatti diijitaala yoo ta'an, sagalee, viidiyoo, giraafiiksii fi ibsa fakkiitiin odeessa kan dhiheessan ta'u.
Oduu walabaa fi haqa qabeessa dhiheessuun alatti, dhimmoota wayitaawoo, ispoortii, bashannana, biiznasii, fayyaa, barnoota fi dubartoota irrattis ni xiyyeeffata.
Maaniloota hirmaachisuu irratti xiyyeeffachuun, BBC'n oduu qofa osoo hin taane dhimmoota gara garaa irratti akka hojjatu aarsiisuufis ni gargaaru.
Dursaan tajaajiloota kunneenii Piitar Okwoochee akka jedhutti, odeessa naannoo dabalatee dhimmoonni Afriikaa fi addunyaa afaanota kunneeniin ni dhiyaatu. Dhimmi dubartootaas xiyyeeffannoo guddaa ni argata.
Dursaan tajaajiloota BBC Lixa Afriikaa Oluwaatoyoosii Ogunseeyee ammoo, hawaasa Igboo fi Yorubaatiif afaan isaaniitiin odeessa adda addaa dhiheessuun baay'e kan nama gammachiisu yoo ta'u, odeeffannoo haarawa, walaba fi haqa qabeessa ta'an Naayijeeriyaa fi Lixa Afriikaatiif dhiheessina.
Viidiyoo BBC Afaan Oromoo maal akka isiniif dhiyeessu feetu?
BBC Afaan Oromoo tamsaasa Raadiyoo eegalee jira
''Kan gaafatamnus yoo tahe walumaani'' Abbaay Tsahaayyee
'Suurri qullaa Piraamiidiitti ka'ame' qoratamaa jira